Regional Conference on Combating Substandard, Falsified and Unregistered Medical Products (Phnom Penh, Cambodia) သို့တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း - Food and Drug Administration, Myanmar
November 11, 2018 January 11, 2019 admin
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာခင်ဇော် သည် နိုဝင်ဘာလ ၄ရက်နေ့မှ ၇ရက်နေ့အထိ Cambodiaနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော Regional Conference on Combating Substandard, Falsified and Unregistered Medical Products (Phnom Penh, Cambodia) သို့တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ Seminar တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြလေးစိန် နှင့် မြောက်ဥက္ကလာပ အထွေထွေရောဂါကုနှင့် သင်ကြားရေးဆေးရုံ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာကြည်စိုးတိုအပြင် အာဆီယံနိုင်ငံများ မှ Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam နှင့် Thailand မှ အစိုးရအရာရှိကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ အထူးအရာရှိများ၊သံတမန်များ၊ WHO၊ US Pharmacopeia၊ International Organization များမှတာဝန်ရှိသူများ၊ NGO မှ ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ၊Experts များနှင့် Pharmaceutical Companies တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
Main Discussion points and key issues raised at the Seminar are;
1. Global and Countries overview on impacts of substandard, Falsified and Unregistered Medical Products
2. Improving surveillance and monitoring system for substandard, Falsified and Unregistered Medical Products
3. Strategy to combat transnational organized crimes and challenges in enforcement
4. Detection of substandard, Falsified and Unregistered Medical Products
5. Improving the content and implementation of national laws and regulation and promoting regional cooperation in the fight against falsified medicine.
ထို့အပြင် Closed Door Discussion များကိုလည်း နိုင်ငံ့ အဖွဲ့ခေါင်ဆောင်များနှင့် WHO, US Pharmacopeia and International Organizations များအကြား အကျေအလည်ဆွေးနွေးကာ Joint Declaration on Combating Substandard, Falsified and Unregistered Medical Products ကိုရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။
← အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း ထောက်ခံချက်ရရှိထားသော သက်တမ်းရှိ အစားအသောက်နှင့် သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းများ Update စာရင်း (၂၆-၉-၂၀၁၈) အထိ
၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာလ ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်အတည်ပြုစာရင်း →
January 10, 2019 admin Comments Off on လမ်းဘေးဈေးသည်များ ရောင်းချနေသော အစားအသောက်များ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းအစည်း အဝေးကျင်းပခြင်း